Miteraka tsikera ny fahalalahana bebe nomen’ny manampahefana misahana ny tontolo iainana ao Bangladesh ho an’ny sehatrasan’ny fandravana sambo · Global Voices teny Malagasy
"Lalàna vaovao manimba ny tontolo iainana! Tena mahafinaritra!"
Voadika ny 01 Desambra 2021 3:34 GMT
Mandoto ny tontolo iainana ny fatin-tsambo lehibe: Sisan-tsambo nilentika hita tao Chattogram, Bangladesh. Sary tao amin'ny Flickr an'i Stéphane M. Grueso. CC BY-SA 2.0
Inona no mitranga rehefa maty ny sambo? Nalefa tany amin'ny fasana mampidi-doza any amin'ny toerana tahaka an'i India, Bangladesh, Shina ary Pakistan izy ireo mba horavàna sy hamidy ho fako. Na izany aza, mitaky asa mafy ny dingana ary tsy misy fepetra fiarovana, ka mahatonga azy ho iray amin'ireo indostria mampidi-doza manerantany.
Vao haingana ny manam-pahefana momba ny tontolo iainana ao Bangladesh no nanaisotra ny satan'ny indostrian'ny fanodinana sambo miloko mena ho lasa volomboasary, midika izany fa tsy takiana amin'ireo mpandrava sambo intsony ny hahazoany Fanombanana ny Fiantraika ara-Tontolo iainana- Environmental Impact Assessment (EIA), mamaritra ny fiantraikan'ilay sehatr'asa (indostria) amin'ny tany, rano, rivotra ary ny fahasalaman’ny olombelona. Niteraka tsikera avy amin'ireo mpikatroka ny tontolo iainana izany.
Isan-taona dia manodidina ny 700 amin'ireo sambo 45.000 eo ho eo mandeha an-dranomasina manerana izao tontolo izao no tsy mandeha intsony ary alefa any amin'ny toerana fandravana sambo. Nivagongo indrindra tany amin'ireo firenena indostrialy hatramin'ny taona 1960 sy 1970 ny indostrian'ny fandravana sambo, saingy nanomboka nifindra izy ireo mba hanararaotra ny asa mora any amin'ny firenena tahaka an’ India, Pakistan ary Bangladesh. Any Bangladesh, miorina eo akaikin'ny tanàna-seranan-tsambon'i Chattogram (Chittagong taloha) ao amin'ny Helodranon'i Bengal ny ankamaroan'ireo toerana fandravana sambo miisa 150. Namorona asa ho an'ireo mponina mahantra indrindra ny sehatr'asa ary mamaly ny ankamaroan'ny tinady vy ao amin'ny firenena hahazoana akora ilaina voalohany sy ny vokatra vita.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nahazo ny toerana ambony indrindra amin'ny fandravana ny antsasaky ny sambo nesorina teto amin'izao tontolo izao latsaka kely i Bangladesh ary mbola laharana voalohany tamin'ny telovolana voalohany ny taona 2021. Ny anton'ny fitomboana dia noho ny tinady vy sy ny fitsipika goragora mifehy ny tontolo iainana eo an-toerana. Saika tsy manana toeram-pitrandrahana vy i Bangladesh, tahaka an'i India ary miankina amin'ny indostrian'ny vy ny fitomboan'ny famokarana ao aminy.
Olona 50.000 eo ho eo no miasa ao amin'ny tobin-tsambo ao Chattogram, ary eo anelanelan'ny 18 sy 22 taona eo ny ankamaroan'ny mpiasa (40 isanjato mahery) ao amin'io sehatr'asa io. Mpiasa am-polony no maty isan-taona noho ny loza ateraky ny asa.
Ny toeram-pandravana sambo ao Chittagong, Bangladesh no ahitana isa ambony tsy mahazatra amin'ny olona maty sy naratra noho ny asa.
Noho ny fahantrana lalina sy ny toe-draharaha ara-politika ao amin'ny faritra havoanan'i Chittagong, maro ny Jummas miasa ao amin'ny toeram-pamakiana sambo ary manao asa mampidi-doza toy izany.
Ny asa fandravana sambo dia ahitana ny fanesorana ireo karazana fanaka, pitsopitsony, kojakoja, maotera rehetra, hatramin'ny fanapahana sy fanodinana ireo rafitra vy amin'ny sambo. Tsy nahita fianarana, tsy voaofana ary tsy ampy sakafo ny ankamaroan'ny mpiasa ao Bangladesh ary manao ireo asa ireo amin'ny tanana tsy misy fitaovam-piarovana na inona na inona.
RANDRANA: #Shipbreaking Fandravana sambo any Bangladesh. Mampitombo izay betsaka indrindra ny tombombarotra ireo orinasa tandrefana manankarena no sady manararaotra ny zo hiaina an'ireo mpiasa mahantra, manary poizina mampidi-doza
Araka ny voalazan'ny Shipbreaking Platform, FTMF iray mifantoka amin'ny loza ateraky ny fandravana sambo, ny ahiahy momba ny sehatr'asa ao Bangladesh dia ahitana fepetran'asa mampidi-doza, loza mahafaty, fanararaotana zaza tsy ampy taona, ary fandotoana tafahoatra ny tany sy rano ary koa fanariana fako mampidi-doza.
Manamafy ny fisian'ny karazana metaly mavesatra imbetsaka mihoatra ny fetra azo antoka ao amin'ny faritry ny sambo, ny tany fambolena mifanila aminy, ary ny ranomasina ny fanadihadiana maromaro, anisan'izany ity nataon'i M. I. Talukder, A. N. M. Fakhruddin ary M. A. Hossain ity tamin'ny taona 2015 . Miditra ao amin'ny vatan'olombelona amin'ny alàlan'ny voly vokarina amin'ny tany ireo metaly mampidi-doza ireo ary miteraka homamiadana sy aretina mahafaty hafa.
Fandravana sambo an-tànana ao Chattogram, Bangladesh. Sary avy ammin'ny Flickrn'i Adam Cohn. CC BY-NC-ND 2.0.
Tamin'ny didim-pitsarana manan-tantara iray tamin'ny taona 2009, nandidy ny Departemantan'ny Tontolo Iainana (DoE-ang) mba hanatsahatra ireo toerana fandravàna sambo miasa tsy misy fanadiovana ara-tontolo iainana ny Fitsarana Ambony Bangladeshita taorian'ny fitorian'ny Fikambanan'ny Mpisolovava momba ny Tontolo Iainana Bangladesh- Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA). Nandidy bebe kokoa ny fitsarana fa tsy misy sambo hovakiana izay tsy nesorina mialoha ireo fitaovana mampidi-doza azo hafaran'ireo Bangladeshita mpandrava sambo.
Lalàna goragora sy fanerena avy amin'ireo tompony
Maro ireo lalàna any Bangladesh mifandraika amin'ny fanodinana sambo — tahaka ny lalàna momba ny fanodinana sy ny fandravàna sambo – Shipbreaking and recycle rules (2011), ny lalàna mifehy ny Fanodinana Sambo eto Bangladesh -Bangladesh Ship Recycling Act (2018) — izay manambara fepetra sy fitakiana maromaro hiadiana amin'ireo fanamby amin'ny indostria sy ny fiarovana ireo mpiasa sy ny tontolo iainana. Na izany aza, tsy nampiharina ny ankamaroan'izy ireo.
Namoaka fanapahan-kevitra manohitra ireo manampahefam-panjakana ambony sy ny filohan'ny Fikambanana Mpandrava Sambo ao Bangladesh noho ny tsy fampiharana ny toro-lalana Marsa 2009 momba ny fananganana komity fanarahamaso tsy mitanila amin'ireo asa fandravàna sambo sy ny fiantohana ny fiarovana ireo mpiasa sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny Fitsarana Ambony Bangladesh tamin'ny volana Aprily 2016. Araka ny tatitra nataon'ny vavahadim-baovao antserasera Bdnews24.com tamin'ny volana Novambra 2016, fangatahana 12 fotsiny tamin'ireo sambo 190 mahery tonga tamin'izany taona izany momba ny Fanombanana ny Fiantraika amin'ny Tontolo Iainana- Environmental Impact Assessment (EIA) ihany no natao.
Araka ny filazan'ny Fitsipika momba ny Fiarovana ny Tontolo Iainana-1997- Environment Conservation Rules-1997, ny sehatrasa voasokajy mena dia manana adidy lehibe indrindra hanaja ny toro-lalana ara-tontolo iainana mila Fanombanana Fiantraika ara-Tontolo Iainana (EIA) ho toy ny fepetra mialoha ho an'ny asa fandravàna sambo. Nanditra ny taona maro, misy ny fandresen-dahatra sy fangatahana marobe avy amin'ireo mpandraharahan'ny indostria mitaky ny fanafoanana ny fitaliana EIA, milaza fanemorana amin'ny fahazoana ny sertifikà, izay matetika maharitra amam-bolana maro. Azo jerena ho famaliana ity fangatahana ity ny fampidinana ny satan'ny sehatrasa fandravàna sambo avy amin'ny loko mena mankany amin'ny loko volomboasary tamin'ny 10 Oktobra.
Tao amin'ny pejy Facebook Daily Star, Md Robel naneho hevitra momba ny vaovao:
Lalàna vaovao manimba ny tontolo iainana!! Tena mahafinaritra!!!
Mujahid Hoque Tuhin naneho hevitra tao amin'ny randran-dresaka momba izany ihany:
Nahoana ireo manampahefana no very fahefana isan'andro isan'andro? Nahoana izy ireo no ataon'ireo karazana tompon'indostria takalon'aina? Vola ve no ao ambadiky ny rehetra sa (misy ny) antony hafa…………??
Tamin'ny 14 Novambra 2021, nandefa fanamarihana ara-pitsarana tamin'ireo manampahefana voakasika ny Fikambanan'ny Mpisolovava momba ny Tontolo Iainana ao Bangladesh, mitady ny fanafoanana ny fanovana sata. Ho hita eo ny ataon'ireo manampahefana sy ny fitsarana amin'izany.